Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.4.1 wax Tirinta
1.4.1 Readymades iyo Custommades
1.4.2 xog badan kakanaanta
1.4.3 Ethics meel kasta
1.5 Kormaris kitaabka
2.3 Tilmaamaha caamka ah ee xogta weyn
2.3.1 Astaamaha in guud ahaan u wanaagsan cilmi-yihiin
2.3.2 Astaamaha in guud ahaan xun yihiin cilmi
2.3.2.1 aan dhammeystirneyn
2.3.2.2 geli karin
2.3.2.4 hor timi
2.3.2.5 Algorithmically wareereen,
2.4.1.1 Tagaasida ee New York City
2.4.1.2 formation Friendship ka mid ah ardayda
2.4.1.3 Faafreebka ee warbaahinta bulshada ay dowladda Shiinaha
2.4.3.1 tijaabo Dabiiciga ah
faallo dheeraad ah
3.2 Waydiinta vs. logu
3.4.1 falanqaynta xog ururinta iyo xog: itimaalka sampling
3.4.2 baarka Non-itimaalka, miisaan
3.4.3 baarka Non-itimaalka: dhigma muunad
3.6 Sahamis lala xogta kale
3.6.1 maqalka weydiinaya
3.6.2 weydiinta Tayeysan
4.5.1 Just u samayn naftaada
4.5.1.1 deegaanno Isticmaal jira
4.5.1.2 dhis aad tijaabo gaar ah
4.5.1.3 dhis aad wax soo saarka gaar ah
4.5.2 Partner la awood ah
4.6.2 beddel, loo tijaabiyo, oo la yareeyo
5 Mass iskaashi
6.2.2 dhadhamiya, Xiriirka, iyo Time
7.1 Raadinta foward
7.2 Dulucda mustaqbalka ah
7.2.1 qasayso ee Readymades iyo Custommades
Tirinta Simple noqon kartaa mid xiiso haddii aad isku su'aal wanaagsan la xogta wanaagsan.
Inkasta oo waxaa la jiifsaday luqad sanqadha casri ah, badan oo cilmi bulsho waa run ahaantii kaliya tirinta wax. In da'da xogta weyn, cilmi-tirin karaa in ka badan abid, laakiin in si toos ah macnaheedu ma aha cilmi in la diiradda tirinta walax iyo aad u badan. Halkii, haddii aynu doonayno inaynu u sameeyaan cilmi-baadhis wanaagsan la xogta weyn, waxaan u baahan nahay in aad weydiisid: waxa ay ka qiimo tirinta? Tani waxaa laga yaabaa in muuqdaan sida arrin gebi shakhsi ahaan, laakiin waxaa jira qaar ka mid ah qaababka guud.
Inta badan ardayda ku dhiiri cilmi tirinta ay by isagoo leh, Waxaan doonayaa inaan tirin wax aan ninna weligii tirin hor. Tusaale ahaan, ardayga waxaa laga yaabaa odhan, dad badan ayaa ka bartay muhaajiriin iyo dad badan oo ku bartay mataano, laakiin qofna ayaa bartay mataano soogalootiga. Rabitaan by maqan badanaa kuma keeni cilmi wanaagsan. Dabcan, waxaa laga yaabaa in sababaha wanaagsan inaad wax ka barato oo mataano ah soo-galootiga, laakiin xaqiiqda ah in ay tahay in aan la bartay ka hor macnaheedu ma aha in ay tahay in ay tahay in hadda la bartay. mid ka mid No abid tiriyo tirada threads on rooga ee aan xafiiska, laakiin in uusan si toos ah tusinayaan in tani waxay noqon lahayd mashruuc cilmi wanaagsan. Rabitaan by maqan waa nooc ka mid ah sida isagoo leh: eegto, waxaa jira god halkaas, oo waxaan u shaqeyn aad u adag in ay u dhammaystiraan. Laakiin, ma dalool kasta oo u baahan in la buuxiyey.
Halkii xiiso by maqan, waxaan u malaynayaa in tirinta raadad si cilmi wanaagsan ee labada xaaladood, marka cilmi waa xiiso ama muhiimka ah (ama ugu fiican labadaba). Tusaale ahaan, wax lagu qiyaaso heerka shaqo la'aanta waa muhiim sababtoo ah waa in tilmaame of dhaqaalaha in kaxeeya go'aannada siyaasadeed. Guud ahaan, dadka waxay leeyihiin dareen wanaagsan ka heystaan ​​waxa uu yahay muhiim. Sidaas daraaddeed, in inta kale ee qaybtan, waxaan doonayaa inaan ku siin saddex tusaale oo meesha tirinta waa mid xiisa leh. Xaalad kasta, cilmi aan la tirin katimid, halkii ay tirinta goobaha aad u gaar ah in shaaca ka qaaday aragtiyo muhiim galay fikradaha guud dheeraad ah oo ku saabsan sida bulshada nidaamka shaqada. In si kale loo dhigo, wax badan oo ka mid ah waxa ay ka dhigeysaa kuwan layliyada tirinta gaar ah oo xiiso ma aha in xogta laftiisa, ka timaado kuwan fikrado dheeraad ah oo guud.
Hoos waxaan ku soo bandhigaynaa doonaa saddex tusaale oo ku saabsan: 1) dhaqanka shaqada ee darawallada taxi ee New York (Qaybta 2.4.1.1), 2) formation saaxiibtinimo by ardayda (Qaybta 2.4.1.2) iyo 3) warbaahinta bulshada dhaqanka Faafreebka ee Dowladda Shiinaha (Qaybta 2.4.1.3). Waa maxay tusaale wadaagaan waa in dhammaan ay u muujiyaan in tirinta xogta weyn waxaa loo isticmaali karaa si ay u tijaabiso saadaasha teori. Xaaladaha qaarkood, ilaha xogta weyn laguu suurogeliyo in aad yara si toos ah samayn tirinta this (sida kiiska ee New York Taxis). Xaaladaha kale, cilmi u baahan doontaa inaad la incompleteness macaamilo wada iyo operationalizing biirtay xogta dhista teori (sida in ay dhacdo of formation saaxiibtinimo); iyo mararka qaarkood cilmi u baahan doonaa si ay u ururiyaan xogta dheehidda iyaga u gaar ah (sida in ay dhacdo faafreebka warbaahinta bulshada). Sida aan rajaynayaa tusaale u muujiyaan, waayo cilmi-kii ay awoodaan in ay ku weydiiyaan su'aalo xiiso leh, xogta weyn heysta yabooha weyn.